septembre 2017 - Page 3 sur 79 -
Faly Ramakavelo : Lalàm-panorenana vao fifidianana filoha
Samy efa re sy hita avokoa ny fanehoan-kevitra avy amin’ireo mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena, mikasika indrindra ny fanovana ny lalàm-panorenana eto Madagasikara; izay hita fa goragora , ary anisan’ny tsy mampilamina ny fitantanana ny firenena …Tohiny
Hopitaly HJRA : Marary iray nahiana ho matin’ny pesta
Vehivavy iray, izay voalaza fa marary avy any Toamasina no tonga teny amin’ny hopitaly HJRA omaly. Raha ny voalaza, dia efa tsy nisy aina intsony ity farany rehefa tonga teny an-toerana. Nataon’ny mpitsabo avy hatrany …Tohiny
By pass : Lehilahy maty nipoahan’ny gaz
Lehilahy iray no namoy ny ainy vokatry ny fipoahana “gaz” tao amin’ny trano iray fanamboarana moto eny By pass omaly maraina. Araka ny voalaza, dia teo am-pikirakirana kodiaran-droa ity niharan-doza ity no nisy fifampikasohana tampoka, …Tohiny
Nanaitra ny sain’ny maro ny nandre ny tenin’ny filohan’ny SMM omaly tetsy Anosy nanao hoe: “Ianareo ze vao dimy taona teo amin’ny fitondrana… Ny sasany aza teo amin’ny fitondrana nandritra ny 21 taona… jamba no …Tohiny
Tohin’ireo ezaka efa fanaon’ny Filoham-pirenena malagasy, Rajaonarimampianina Hery mivady isan-taona, izay notanterahina omaly teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny fizarana ireo “kits scolaires” ho an’ity taom-pianarana 2017-2018 ity. “Kits scolaires” miisa 60 000 no nozaraina ho ...Tohiny